Barcelona Oo Iibka Griezman Shuruud Uga Dhigtay Saddex Ciyaaryahan | Berberatoday.com
Barcelona Oo Iibka Griezman Shuruud Uga Dhigtay Saddex Ciyaaryahan
Madrid(Berberatoday.com)-Marka laga soo tago in meel wanaagsan ay ka joogto tartan walba ay ku lug leedahay kooxda Barcelona ayaa wali ka bixin suuqa kala iibsiga waxaana ay xagaaga doonayaan in ay sameeyaan saxeexyo hor leh.
Suuqii jiilaalka ee la soo dhaafay Barcelona ayaa hor maro ka samaysay suuqa kala iibsiga, waxaana ay Camp Nou ka soo dajiyeen Philippe Coutinho iyo Yerry Mina, qorshahooda ayaan wali ku jira in ay saxeexyo keenaan kooxda.
Wadahadaladii Barcelona ee ku aadanaa Arthur ayaa soo idlaaday, waxaana kaliya la sugayaa in xiddiga Brazil uu yimaado xagaaga kooxda maamusha Camp Nou.
Hadafka ugu weyn kooxda Valverde waa Antoine Griezmann.
Barcelona ayaa xagaagii la soo dhaafay ku fikirtay in saxeexa laacibka France, laakiin rajadii Barcelona ee Greizmann ayaa ceel ku dhacday maadaama kooxdiisa Ateltico Madrid ay dalbatay aduun dhan 200 Milion oo Euros.
Laakiin hada wax waliba ayaa is badalay, ciyaariyahanka ayaa qandaraaskiisa lagu bur burin karaa 100 Milion waxaana jirta suurta galnimo Barcelona ay markale ku damci karto laacibkaasi.
Qodobka kale ee Barcelona ay ku heli karto Greizmann ayaa ah qaab amaah ah, maadaama kooxda ay gali doonto dhismaha garoonkooda Camp Nou isla markaana aanay heshiisyo lacago qaali ah ku kacaya samayn karin.